မောင်ထွန်းသူ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ထွန်းသူ၊ မောင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၁၉၃၁ - ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အဖ မြေတိုင်းစာရေး ဦးဖေတင်၊ အမိ ဒေါ်ဖြူတို့က မန္တလေးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ပျော်ဘွယ်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း သား ၂ ယောက်အနက် အကြီးဖြစ်၍ အမည်ရင်းမှာ ဦးတင်ထွန်းဖြစ်သည်။
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၉၃၁ - ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်
ကွယ်လွန် ၂၀၀၇ - မတ်လ ၁၉ ရက်
ပညာရေး ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ လူမှုသိပ္ပံ ဒီပလိုမာဘွဲ့
မွေးရပ်ဇာတိ မန္တလေးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ပျော်ဘွယ်မြို့
ငယ်စဉ်က ပျော်ဘွယ်၊ ရမည်းသင်း၊ ပျဉ်းမနားမြို့များတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကတည်းက စာတိုပေစများ ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၅၁ - ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ရမည်းသင်း အထကမှ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဆက်တက်ခဲ့သည်။
၁၉၅၅ - ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၅၅ - ၅၈ - စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ မာလာယုတက္ကသိုလ် (University of Malayu) မှ 'လူမှုသိပ္ပံ ဒီပလိုမာဘွဲ့' ရရှိသည်။
၁၉၅၈ - လူမှုဝန်ထမ်းဌာနတွင် အရာရှိ အဖြစ် အမှုထမ်းသည်။ ထို့နောက် လူမှုဝန်ထမ်းဌာန၌ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးဝန် အဖြစ် အမှုထမ်းသည်။
၁၉၆၂ - အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနဝန်ထမ်းမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ပြန်ကြားရေးဌာနတွင် ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ရာမှ မောင်ထွန်းသူ၊ ထွန်းနိုင်ဦး၊ ဉာဏလုပ်သားတစ်ဦး စသော ကလောင်အမည်များဖြင့် ခရီးသွားဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးများနှင့် ဝတ္ထုတိုများ စတင်ရေးသားခဲ့သည်။
၁၉၆၂ - ၈၃ - ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ရှေ့သို့ Forward စာစောင်တွင် အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ဝင် တဦးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း (အထက်တန်း ကျောင်းသား ဘဝ ကတည်းက စာတိုပေစများ ရေးသားခြင်းနှင့် မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် ဖြစ်၍ မောင်ထွန်းသူ အမည်ဖြင့် စာပေများ စတင် ရေးသားတော့သည်။)
၁၉၇၅ - ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ပညာသင်ဆုဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လူမှုသိပ္ပံပညာရပ် ဆိုင်ရာသင်တန်းများ တက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
၁၉၈ဝ - ပင်ကိုယ်ရေးဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် တောင်ပံမဲ့သည့် ငှက်ငယ်များ စာအုပ်ထွက်ရှိသည်။
၁၉၈၁ - ခရီးသွားဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် ခေတ်တစ်ခေတ်၏ ကြေးမုံပြင် စာအုပ်ထွက်ခဲ့သည်။
၁၉၈၃ - ပြန်ကြားရေးဌာနမှ အငြိမ်းစားယူသည်။ အေဂျေကရိုနင်၏ဝတ္ထု ရဲတိုက် (ဘာသာပြန်) ၂-တွဲ ထွက်၊ ယင်း နှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေ (ဘာသာပြန်-ရသ) ဆုရရှိသည်။
၁၉၈၅ - ကင်မီလီ၊ ဆဋ္ဌမသုခရိပ်မြိုင်၊ တက်စ်(၂)တွဲ၊ အကျဉ်းစံ၊ သံမဏိကြက်ခြေ၊ မြိုင်ခေမာ၊ ဆိုင်းလတ် မာနာ စသော ဘာသာပြန်စာအုပ်များထွက်သည်။
၁၉၈၆ - ဒေါသမာန် (၂-တွဲ) ဘာသာပြန်စာအုပ်ထွက်သည်။
၁၉၈၈ - ရှန်ဂရီလာ၊ အနီနှင့် အနက်၊ တို့ပိုင်တဲ့မြေ၊ တို့ဘဝ တို့ကမ္ဘာ စသော ဘာသာပြန်စာအုပ်များ ထွက်သည်။
၁၉၉၃ - စိမ်းရက်လေအား၊ ဇာစ်မြစ် (၃-တွဲ)၊ နှစ်လောက သစ္စာရှင်စသောဘာသာပြန် စာအုပ်များထွက်သည်။
၂၀၀၁ - ဆိုင်ဂုံ (၆-တွဲ)၊ နောက်ဆုံးမြေ၊ ရမ္မက်မီး၊ စသော ဘာသာပြန်စာအုပ်များထွက်သည်။ ရှားလော့ဟုမ်း၏ ရှားလော့ဟုမ်း (ဘာသာပြန်) ထွက်သည်။
၂၀၀၂ - မျှော်တလင့်လင့် (ဘာသာပြန်) စာအုပ်ထွက်သည်။
၂၀၀၄ - ဝံပုံလွေများနှင့် ကခုန်ခြင်း (ဘာသာပြန်)စာအုပ်ထွက်။ ယင်းစာအုပ်ဖြင့် ၂၀၀၃-ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသား စာပေ (ဘာသာပြန်ရသ) ဆုရသည်။
ခရီးသွား ဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန် ဆောင်းပါးများ၊ ဝတ္ထုတိုများ အပြင် မြဝတီ မဂ္ဂဇင်း၊ ငွေတာရီ မဂ္ဂဇင်း၊ လုပ်သားပြည်သူ့ နေ့စဉ် သတင်းစာများ၌လည်း ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၌ မိခင်ဌာန ဖြစ်သည့် လူမှုဝန်ထမ်းဌာနတွင် တိုင်းလူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးမှူးအဖြစ် ပြန်လည် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပညာသင်ဆု (United Nation Human Rights Fellowship Award, 1974) ရရှိရာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ သွားရောက်၍ လူမှုသိပ္ပံ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဘဝမှ အငြိမ်းစားယူသည်။
၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်တွင် စာပေဗိမာန်ထုတ် 'တောင်ပံမဲ့သည့် ငှက်ငယ်များ' ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် စာအုပ်နှင့် ၁၉၈၃ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသား စာပေဆု ချီးမြှင့်ရာတွင် ဘာသာပြန် ရသစာပေဆု ရရှိသည့် 'ရဲတိုက်' စာအုပ်တို့သည် မောင်ထွန်းသူ ပထမဆုံး ရေးသားသည့် ပင်ကိုယ်ရေး လုံးချင်းဝတ္ထုနှင့် မြန်မာဘာသာပြန် လုံးချင်းဝတ္ထုတို့ ဖြစ်သည်။
မောင်ထွန်းသူသည် စာပေဝါသနာ ပါသည့်အလျောက် နိုင်ငံခြားဝတ္ထုများကို ရွေးချယ်၍ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆို ရေးသားခဲ့သည်။ မောင်ထွန်းသူ ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည့် တက်စ်၊ အကျဉ်းစံ၊ သံမဏိ ကြက်ခြေ၊ တို့ပိုင်တဲ့မြေ၊ တို့ဘဝ တို့ကမ္ဘာ၊ စိမ်းရက်လေအား၊ ဇာစ်မြစ်၊ နှစ်လောက၊ သစ္စာရှင်၊ ဆိုင်ဂုံ၊ နောက်ဆုံးမြေ၊ ရမ္မက်မီး စသည့် ဘာသာပြန်ဝတ္ထုများ ထင်ရှားခဲ့လေသည်။
ဘာသာပြန် စာရေးဆရာမောင်ထွန်းသူသည် ဘာသာပြန်ဝတ္ထုစာအုပ်ပေါင်း ခုနစ်ဆယ်ကျော်ကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်၌ အစိုးရ ဝန်ထမ်းဘဝမှ အငြိမ်းစား ယူခဲ့ပြီးနောက် စာပေလောကအတွင်း ဝင်ရောက်ကျင်လည်ခဲ့သည့် မောင်ထွန်းသူကား ယနေ့အချိန်အထိ ဘာသာပြန် စာအုပ်များ ဆက်လက် ရေးသား ထုတ်ဝေလျက် ရှိသည်။
အမှတ် (၅၂၉)၊ ရွှေစင် (၇) လမ်း၊ ဒဂုံသစ်မြောက်ပိုင်း (၄၄) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
၂ ရေးသား ပြုစုခဲ့သော စာအုပ်များ
အသက် ရ၆-နှစ်အရွယ် ၂၀၀၇ - မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁ဝ: ၃ဝ နာရီတွင် တောင်ဥက္ကလာရှိ အောင်ရတနာ အထူးကုဆေးခန်း၌ လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီးဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့် နှင့် သားသမီးများ (ကိုလွင်ဦး)+ဒေါ်သိန်းသိန်း၊ (ကိုကိုနိုင်) + ဒေါ်မေချိုအေး၊ မသီတာ၊ ကိုကိုအောင်၊ ကိုဝင်းထူး+မတင်မြတ် မြတ်မိုး၊ ကိုမျိုး(IR)ဗြူးတီမဂ္ဂဇင်း၊ ကိုအောင်တင်ဝင်း+ မဇင်မာထွန်းသူနှင့် မြေး ၈ ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ဆရာမောင်ထွန်းသူသည် ဘာသာပြန်လုံးချင်း ဝတ္ထုပေါင်း ၇၀ ကျော်မျှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီး၍ ဆက်လက်ထွက် ရှိရန်ကျန်ရှိသည့် စာအုပ်များမှာ ပီကင်း (စိတ်ကူးချိုချိုတိုက်)၊ ဗင့်ဆင့်ဗန်ဂိုးသို့ ပေးစာများ စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်၊ တိုကျိုပင်လယ်ကွေ့ (မြနန္ဒာ တိုက်) တို့ဖြစ်သည်။ ပြုစုဆဲ စာအုပ်များမှာ ကမ္ဘောဒီးယားဖိုင် (ဘာသာပြန်)၊ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်များ (ဘာသာပြန်) နှင့် ကျွန်တော့်ဘဝ စာပေခရီး တို့ဖြစ်သည်။
၁။ တောင်ပံမဲ့သည့် ငှက်ငယ်များ (ပင်ကိုယ်ရေး ဝတ္ထုတိုများ) ၁၉၈၀
၂။ ခေတ်တခေတ်၏ ကြေးမုံပြင် (ခရီးသွားဆောင်းပါးများ) ၁၉၈၀
၃။ ရဲတိုက် (ပ+ဒု) ၁၉၈၃ (Citadel by A.J. Cronin)
၄။ ကင်မီလီ ၁၉၈၄
၅။ ဆဋ္ဌမ သုခရိပ်မြိုင် ၁၉၈၄
၆။ ရှာပုံတော် (ပ+ဒု) ၁၉၈၄
၇။ တက်စ် (ပ+ဒု) ၁၉၈၄
၈။ အကျဉ်းစံ ၁၉၈၄
၉။ သံမဏိ ကြက်ခြေ (ပ+ဒု) ၁၉၈၅
၁၀။ ဆိုင်းလတ်မာနာ ၁၉၈၅
၁၁။ ဒေါသမာန် (ပ+ဒု) ၁၉၈၆ (The Grapes of Wrath by John Steinbeck)
၁၂။ ရှန်ဂရီလာ ၁၉၈၇
၁၃။ အနီနှင့် အနက် (ပ+ဒု) ၁၉၈၇
၁၄။ တို့ပိုင်တဲ့မြေ ၁၉၈၇ (Of Mice and Men by John Steinbeck)
၁၅။ တို့ဘဝ တို့ကမ္ဘာ ၁၉၈၇ (Tortilla Flat by John Steinbeck)
၁၆။ ကာမင်း ၁၉၈၇
၁၇။ စိမ်းရက်လေအား ၁၉၈၉
၁၈။ မြိုင်ခေမာ ၁၉၉၀
၁၉။ သား ၁၉၉၁
၂၀။ အိုလက်ဘီယာ ၁၉၉၁
၂၁။ ချစ်သွေးဟုန် ၁၉၉၁
၂၂။ နှင်းကင်းတပြိုင် နွေတရှိုက် ၁၉၉၁
၂၃။ ဇာစ်မြစ် (ပ+ဒု) ၁၉၉၂
၂၄။ နှစ်လောက (ပ+ဒု) ၁၉၉၂ (The Adventures in the two worlds by A.J. Cronin)
၂၅။ မေတ္တာနှောင်ကြိုး (ပ+ဒု+တ+စ) ၁၉၉၂
၂၆။ ချစ်လူဆိုး (ပ+ဒု+တ) ၁၉၉၂
၂၇။ သစ္စာရှင် (ပ+ဒု+တ) ၁၉၉၃
၂၈။ ဆိုင်ဂုံ (ရှစ်တွဲ) ၁၉၉၃ (Saigon by Anthony Grey)
၂၉။ အစိမ်းရောင်နှစ်များ (ပ+ဒု) ၁၉၉၃
၃၀။ ချစ်သောမာယာ ၁၉၉၃
၃၁။ တို့ယာမြေ ၁၉၉၃
၃၂။ နောက်ဆုံးမြေ ၁၉၉၃
၃၃။ သွေးကန္တာရ (ပ+ဒု) ၁၉၉၃
၃၄။ ည (ပ+ဒု) ၁၉၉၃
၃၅။ ကင်နရီရိုး ၁၉၉၃ (The Canery Row by John Steinbeck)
၃၆။ ဆင်ကုန်သည် (ပ+ဒု) ၁၉၉၄
၃၇။ ထောင်ချောက် (ပ+ဒု) ၁၉၉၄
၃၈။ နာနာ (ပ+ဒု+တ) ၁၉၉၄
၃၉။ စိတ်ထားတာဝတိံ (ပ+ဒု) ၁၉၉၄
၄၀။ အိပ်မက်တောင်ကြား ၁၉၉၄
၄၁။ ချစ်ကြွေးမပြေ ၁၉၉၄
၄၂။ အမေ့အိမ်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ ၁၉၉၄
၄၃။ ပြေးနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ ၁၉၉၄
၄၄။ တော်လ်စတွိုင်း၏ ဝတ္ထုတိုများ (ပ+ဒု+တ) ၁၉၉၅
၄၅။ ချစ်သွေးသစ္စာ (ပ+ဒု) ၁၉၉၅
၄၆။ အသောအထေ့ ဝတ္ထုတိုများ ၁၉၉၆
၄၇။ မာန် ၁၉၉၆
၄၈။ ကြောက်စရာ့ ရောမနှင့် မော်ရေးဗီးယား ဝတ္ထုတိုများ ၁၉၉၉
၄၉။ ပြုံးတမဲ့မဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြား ဝတ္ထုတိုများ ၁၉၉၉
၅၀။ လူနာစောင့် ခဝါသည်နှင့် နိုင်ငံတကာ ဝတ္ထုတိုများ ၁၉၉၉
၅၁။ တောင်ပံမဲ့လျက် လေထဲပျော် ၂၀၀၀
၅၂။ စစ်နှင့် အနိဌာရုံ ၂၀၀၀
၅၃။ သေရွာပြန် မြင်းသည်တော်နှင့် နိုင်ငံတကာ ဝတ္ထုတိုများ ၂၀၀၀
၅၄။ ရှားလော့ဟုမ်း၏ ရှားလော့ဟုမ်း ၂၀၀၀
၅၅။ ကြက်သွေးရောင်ပန်း ၂၀၀၁
၅၆။ ရမ္မက်မီး ၂၀၀၁
၅၇။ နက်ဒယာ ၂၀၀၁
၅၈။ သာဘား၏ စာစု ၂၀၀၁
၅၉။ ရှားလော့ဟုမ်း၏ စွန့်စားခန်း အသစ်များ ၂၀၀၂
၆၀။ နွေတံခါး ၂၀၀၃
၆၁။ ရှားလော့ဟုမ်း၏ သည်းထိတ်ရင်ဖိုများ ၂၀၀၃
၆၂။ မော်ရေးဗီးယား ဝတ္ထုတိုများ ၂၀၀၃
၆၄။ အို - ဟင်နရီ ဝတ္ထုတိုများ ၂၀၀၃
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မောင်ထွန်းသူ&oldid=572445" မှ ရယူရန်
၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။